Anigu Hadal lama Gabbado
By ibrahim Aden shire February 03, 2018
Amuuraha ugu waaweyn ee diinteennu la timid waa horumarinta nolosha aadanaha iyo sare u qaadidda wada noolaanshaha bulshada. Eebe wuxuu Suuratul Al_ancaam aayadda 108aad ku reebay in la caayo ilaahyada gaalada sababta loo reebayna waa in ay ka falceliyaan oo ay iyaguna Eebe caayaan.
Sidoo kale wuxuu suuratul Xujuraad aayadda 11aad ku reebay in la isugu yeero naanaysyo la dhibsanayo. Suubanaha SCW ayaa isaguna ficil ahaan iyo hadalba ku sheegay inaan ilaalinno quluubta walaalaheen oo aannan ku dhihin hadal ay dhibsadaan. Axaadiis badan ayaa tilmaamayso in kalmadda wanaagsan ay sadaqo tahay.
Sababta sidaan loogu caddeeyay looguna adkeeyay inaan la is dhihin hadallo la isku dhibsado ayaa ah in la helo wada noolaansho daggan oo aan colaad iyo naceyb xambaarsanayn. Waxaa la wada ogyahay inuusan jirin qof ka aamusayo hadal qalloocan oo lagu yiri. Ka falcelinta hadallada xunna waxay u gudbi gacan-qaad iyo colaad uurka la isugu qaado.
Shucuubta ku nool adduunyada Galbeed waxaa aad loo baraa sida loo wada hadlo. Waxaa ilmaha lagu tarbiyeeyaa doorashada erayada ku habboon dadka uu la macaamilayo iyo inuusan hadal xun ku dhihin qof maqlayo. Marar badan arrintaan waan ku durnaa waxaana ku eedaynaa munaafaqad iyo labo wajiilayn.
Goobaha waxbarashada mid sare iyo hoosaba waxaa had iyo jeer ardayda la xasuusiyaa ilaalinta qalbiyada jaalkooda. Waxaan xasuustaa asbuucii iigu horraysay ee aan waxbarasho ka billaabay wadankaan in madaxa kolejka uu ku wareegay fasal walba.
Qiyaasti kolejkaas waxaa dhiganayay sagaal kun oo arday. Fasal walba mar ayuu galay wuxuu xasuusiyay in dhammaan ardayda meeshaan timid yihiin dad aan ceeb lahayn. Erayada aan ka xasuusto hadalkiisi waxaa ka mid ahaa “qofka caadiga waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay midka yaqaan meesha uu baska ka raaco iyo jidka uu gurigiisa u maro”. Taasu waxay ka dhigatan tahay qof ceeb leh kolejkaan ma imaan.
Hasa ahaatee, soomaalidu waxaad mooddaa inay khilaafeen jidka toosnaa ee islaamka iyo caqliga fayowba keenayaan. Erayada ammaanta noo ah waxaa ka mid ah: hadalka lama gabbado, dadka gadaashooda kama hadlo, waxaan qabo ma qarsado, iyo kuwo la mid ah.
Marka aan nimaadno waddamada Galbeed waxaa nagu jiro dhiiraraan iyo turid la’aan aan laga fakerin saamaynta ay ku yeelan karto qofka lala hadlayo iyo dhibka ay abuuri karto. Marar dib u jalleeco sidaan u hadli jiray ayaamahan qurbaha ku cusbaa qalbigaa i xanuuno.
Marki aan Yurub imid, anigoo joogo muddo ka yar bil ayaan waxaan marti ku noqday xaafad uu dagganaa nin aan qaraabo nahay. Ninka guriga leh shaqo ayuu aadaa sagaalka subaxnimo shantana ayuuna soo laabtaa. Anigu habaynki ayaan fiidsadaa sidaa darted subixii horay uma kaco.
Markaan barqadi soo kaco waxaan fadhiga ugu imaadaa wiil dhalin yaro ah oo tiifiiga daawanayo. Wiilku isha kama qaado waxa uu daawanayo, aad ayuu ula socdaa borogaraamka ugu jiro, mararka qaar wuu la qoslayaa, ilama hadlo, haddaan wax waydiiyana jawab kooban ayuu i siiyaa.
Waxa isoo baxday inuusan fiyoobayn. Anigoon wax cabsi ah qabin ayaan ku iri Caliyow (magaciisa runta ah maahan) wax miyaa kaa qaldan? Si fudud ayuu igu yriri “haa”. Kama harine waxaan ku iri “oo maxaa kaa qaldan? Wuxuu iigu jawaabay “waan durnahay” daawashadiisi ayuuna iska sii watay, anna waan ka aamusay.
Caqligu wuxuu keenayaa in haddii aan fahmay inuusan ninkaan maskixiyan fiyoobayn aan iska ilaaliyo hadalkana ooga turo. Haddii aan u baahday inaan wax ka ogaado waxay ahayd inaan waydiiyo ninka guriga leh oo xaaladda wiil aad u og siduu gadaal iiga sheegi doonaba. Laakiin dhaqanki aan kusoo koray ee ku dhisnaa waxaad qabto sheeg ayaa igu xambaaray inaan wiilka ku iraahdo hadallo naftayda khatar galin karay, isagana dhawaac maskaxeed u gaysan karay.
Turid la’aanta hadalka ee aan caruurteenna ku barbaarinno waxaa i xasuusiyay dhacdo 2 bil ka hora an la kulmay. Gabar shan jir ah ayaa iskool ii aaddo. Labis caadi ah ayaan u xiraa madaxana wuu bannaanaan jiray (hadda khimaar ayay saarataa). Ku tala gal ayaan u sameeyay inaan madaxa u banneeyo.
Iskoolki waxaa la keenay wiil soomaali ah oo 8 jir ah oo hadda waddanka yimid. Aniga oo gabadhi soo waday iyo isagii oo hooyadii waddo ayaa albaabka laga soo baxayo ku kulannay. Markaan Afsoomali kula hadlay ayuu lasoo booday “oo middaanna ma muslimbaa?” ani iyo gabadhaydi waan ku qosolnay laakiin hooyadii oo is ceebsatay ayaa tiri waxbo muu yaqaan hadduu waddanka yimid.
Wiilku gabadha timaha bannaan markuu arkay wuxuu ku darsaday liiska gaalada illeen caradi uu ka yimid ayaa sidaa ahayde kumana ceebaysno aamintaanka arrintaas, laakiin haddii la bari lahaa in aan dadka lagu dhihin hadal ay dhibsan karaan sidaas uma hadleen.
Dhowr asbuuc ka dib, hooyadii wiilka lahayd waxbo muu yaqaan ayaa ku kacday mid ka daran tuu wiilku galay. Iyadoo caruurta waddo ayay la kulantay hooyo soomaaliyeed oo aan daris nahay oo canug sadex jir ah iskoolka u waddo. Qoftii cusbayd waxay ula muuqatay inay hooyadaan aysan dhali Karin canuga sidaan u yar. Cabsi la’aan ayay ku tiri “wiilkaan ma ayeey baad u tahay” hooyadii oo anfariirsan ayaa ugu jawaabtay “anaa isla haray”.
Qofka kasta wuu dareemi karaa inta erayadaas kasii dhawaaqi doonaan dhaqaha hooyadaas. Qiimayn iyo miisaamid iyo hadalkaadu muxuu dhimi karaa toonaa ma leh. Qofkaan waa adoo kale’e waxaad dhibsan lahayd ha ku dhihin ma leh.
Waa lagama maarmaan inan xoogga saarno wanaajinta hadalka iyo xulashada erayada aan isticmaalno. Waxa aan u maqalno waayeel af adag iyo qof wanaag u socdo oo isticmaalayo erayo gaf ah, waa barid la’anta hadalka iyo dhaqanka ku dhisan ‘is giiji’.